We She Me: နိုင်ငံခြားကို အထင်မကြီးသူများ - ပြန်ကြားစာများ
“နိုင်ငံခြားကို အထင်မကြီးသူများ” Post အတွက် ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်ကနေ Comment တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရေးပေးကြတာကို ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Comment မဖတ်ဖြစ်တဲ့ သူတွေ၊ မဖတ်နိုင်သူတွေ အတွက် ရည်ရွယ်သလို စုစုစည်းစည်း ဖတ်ရအောင်လည်း ပါပါတယ်။ (ဟစ်တက်အောင် လုပ်စားတာလည်း ပါပါတယ် အဟက် အဟက်)
စာတွေကို ပြင်ဆင်ခြင်း မရှိပေမယ့် လိုအပ်သလို ဖြက်တောက်ထားပါတယ်။ (ညှင်းညှင်း..ညှင်း စာပေ ကင်ပေတိုင်တွေလိုပေါ့။ နောက်တာပါ။) မူရင်း ရေးသွားသူတွေကို တောင်းပန်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်ပဲ ဖတ်ရပါစေ ဆိုပြီးတော့ပါ။ နိုင်ငံ အလိုက်ပဲ စုထားပြီး မူရင်း ပြန်စာတွေ အပြည့်အစုံကိုတော့ အဲဒီပို့စ်မှာ ပြန်ဖတ် နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲဒီ ပို့စ်မှာ ကောမန့်တွေ ထပ်လာရင်လည်း ဒီမှာ ထပ်တင်ပါဦးမည်။
ထူးခြားတာက အများက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ အချက်တွေကို ပြောသွားတာပါပဲ။ တကယ်တော့လည်း သူနိုင်ငံနဲ့သူ ကောင်းတာ မကောင်းတောတွေ ရှိတာပဲ။ ကျွန်တော်လည်း သြော်ဇီ မကောင်းကြောင်းတွေ သိရအောင် ရေးပါဦးမယ်။ ဒါတွေ ကြည့်ပြီးတော့ Overall အခြေအနေကို ကောက်ချက်တော့ ချလို့တော့မရ ဘူးပေါ့။ ဗဟုသုတ (တပိုင်းတစ) အနေနဲ့ပဲ တင်ပြထားတာပါ။
မလေးရှားမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့တုန်းက လစာနည်းနည်းလေးရပေမယ့် အရမ်းပျော်တယ်။ ပျော်ရွှင်ရခြင်း အကြောင်းရင်းတွေကတော့ အများကြီးပါ။ အဲသည်လောက် ကြာကြာနေဖူးမှ သိမှာပါ။
စင်္ကာပူမှာ မနှစ်သက်တဲ့အချက်တွေ အများကြီးရှိသည့်အနက် အထူးမနှစ်ခြိုက်ဆုံးကတော့ နိုင်ငံရေးစနစ်အရ မလွတ်လပ်ခြင်းပါဘဲ။ ကိုယ်ကလည်း နိုင်ငံရေးကို နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားမိသွားတော့၊ ကိုယ့်နိုင်ငံအရေးမှာ တတတ်တအား ပါဝင်ပတ်သက်နေမိတော့ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်လို့ကို မရအောင်ပါဘဲ။
ဒါပေမယ့် ကိုအင်ဒီပြောတဲ့အတိုင်း စင်္ကာပူမှာ ကောင်းတဲ့အချက်တွေကတော့ (၁) နေထိုင်ခွင့် အင်မတီးအင်မတန် လွယ်ကူခြင်း (၂) မိသားစု ခေါ်လို့လွယ်ခြင်း (၃) ဗမာပြည်နဲ့ အလွယ်တကူ ကူးလူးဆက်ဆံနိုင်ခြင်း တို့ပါဘဲ။ (မြန်မာတွေအတွက် ကောင်းတာပါ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေအတွက် ကောင်းသလားဆိုတာကတော့ သူတို့ကို မေးကြည့်မှဘဲ သိမှာပါ။)
တခု စဉ်းစားစရာတော့ရှိတယ်။ ကျနော့် ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ သြော်ဇီ၊ ယူကေ၊ အမေရိကား၊ ကနေဒါ စသဖြင့် ထွက်သွားတဲ့ လူတွေအနက် စင်္ကာပူကို ပြန်လာတဲ့ မြန်မာဆိုတာ ရွှေလိုရှားတယ်။ ကိုအင်ဒီတို့၊ မကေတို့၊ မမိုးချိုသင်းတို့ စင်္ကာပူကို ပြန်လာခဲ့ကြဗျာ။ လွမ်းလို့...ဟိ။ နည်းနည်း မြန်မာပြည်မှာ နောက်ဆံတင်းစရာမရှိတဲ့လူဆိုရင် မျက်စိပွင့်လာတာနဲ့ စင်္ကာပူကနေ ပြေးကြဘို့ ကြံကြတော့တာဘဲ။ စင်္ကာပူလူမျိုးထဲက မျက်စိပွင့်သွားတဲ့လူတွေလည်း မနေကြပါဘူး။ ပြေးကြတာပါဘဲ။ မပြေးနိုင်တဲ့လူတွေကလည်း တညည်းညည်းတတွားတွားနဲ့ ကျန်ရစ်တော့တာပါဘဲ။
နိုင်ငံခြားမှာ ဘ၀တွေက ဟာတာတာ ဖြစ်နေတာတော့ အမှန်ပဲ။
တနေ့တနေ့ ဒီ HDB လှောင်အိမ်ထဲက ထွက် လိုက်ဝင်လိုက်နဲ့ စိတ်ကုန်လှသဗျာ....
တကယ်ပဲ ကျနော်ရောက်ခါစက ကြိုက်ပါတယ် အထင်လည်းကြီးတယ်....အခုတော့ လုံးဝနိုးပဲ..
စလုံးက စိတ်ဓာတ်လေးတွေ သိသွားပြီဗျ..ဒီကလူတွေက ခံစားချက်မရှိတဲ့ စက်ရုပ်သာသာတွေပဲ။
တစ်ဖက်စွန်းကနေ အခြားတစ်ဖက်စွန်းကို ၁ နာရီကြာအောင် ကားမမောင်းရတဲ့ ကျွန်းပိစိကွေးလေးမှာ မြန်မာသူငယ်ချင်း မရှားတာနဲ့ မြန်မာအစားအစာ အလွယ်တကူ ဝယ်လို့ရတာကလွဲရင် တခြားနိုင်ငံတွေလောက် ပျော်စရာမကောင်းတာတော့ အမှန်ပါပဲ
we don't think highly of Sg Univ too.. i noe quiteafew of burmese who studied in ausi, uk and came back to sg... not to talk abt its own ppl coming back.
စင်ကာပူကလူတွေကိုတော့အားကျတယ်။ မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းများလို့။ .... အနာဂတ် မြန်မာပြည်လေးမှာ နေရသလိုမျိုးလေးလိုဆိုတော့။
The author claims that early 1960s, Kenya was doing better than Singapore, the latter was full of slums, mosquito and rat infested shanty towns, where everyone spits everywhere. Now Singapore is one of the most developed nations less than 50 years or2generations.
စင်္ကာပူ - ဥရောပ
ဥရောပက laid back life style တဲ့။ စင်ကာပူလို stressful မဖြစ်ဘူးတဲ့။ ကိုယ်ကတော့ country road တွေတမျှော်တခေါ်လျှောက်ရတာကို shopping mall တွေနဲ့မလဲနိုင်ဘူး။ technology လုံခြုံရေးနဲ့သန့်ရှင်းရေးမှာတော့စင်ကာပူက အများကြီးသာပါတယ်။ ည၁၂နာရီထိုးမှလည်း MRT စီးပြီးတစ်ယောက်ထဲပြန်လာရဲတယ်။ ဒီမှာတော့ ညနေမိုးချုပ်ရင်တစ်ယောက်ထဲလမ်းလျှောက်ဖို့ မစွန့်စားဝံ့ပါဘူး။
Singapore isagood stepping stone for Burmese ...........The compensation (even in post tax absolute terms), opportunities (job and quality of higher education) and quality of life (food, housing, communication, transportation, leisure) is better than half of the Western European nations.
I do not mean that those in Singapore should not seek opportunities elsewhere.
But make sure you get most out of it from Lion city. There you can get good education (public universities and polytechnics in Singapore are better choice than third tier Universities in UK), for example, if one cannot afford the UK education straight away, use Singapore as stepping stone. Earnagood MSc in Singapore and go for UK for best graduate school there. Or study in Singapore Polytechnics and go for B.Eng or M.Eng (3 or4years undergraduate degree) studies at UK universities. Or getaBachelor in Singapore, work and save money for MBA in UK, etc.. or try to winaPhD there. If you have already earnedaPhD in Singapore go to UK, Canada, Europe or US for post doctorate opportunities. I am not asking to beatin can collector who earned MSc in Yangon, then went for MSc in Singapore and MSc in elsewhere again. I think2public universities in Singapore are as good as top 20 UK universities or top 100 US universities or top5Ausi universities.
In the Netherlands,afresh grad MSc (or first year PhD pay at top engineering universities) make about 1800 Euros while 4th year PhD makes about 2200 Euros. A fresh grad MSc in top Dutch electronics giant makes about 2200 to 2400 Eurosamonth, the rent is about 700 to 800 Eurosamonth. And you can calculate its saving potential is almost like Singapore. In Germany, the same is true and there are not so many jobs. In France, its youth are working overseas as hard to get permanent jobs.
Elsewhere in Europe, for example in Spain, Italy (southern parts), Portugal, Greek and everywhere in Eastern Europe, pay is less than Singapore (in absolute terms, even before tax). I hope you getapicture by now.
In UK,afresh graduate with second class honors (in Engineering, Maths and Physics) from top5universities got offers of pay arounud 24,000 Poundsayear. There are more than 300 universities in UK. Graduates from other majors, Graduates (with third class honors, without honors) in Engineering, Graduates from lesser universities start with less than that amount. Some MSc holders started jobs in UK with pay less than 20,000ayear. There are some Burmese who makes around 50,000 Poundsayear with experienced engineer, senior engineer, or managerial jobs but starting pay are somewhere around less than 25000 even if you earnedafirst class honors from top universities.
The tax rate is above 20%. So best case scenario, the take home pay is around 18,000 to 20,000 Pounds which is about 50,000 to 60,000 Singapore Dollars. That translated to 4000 to 5000 Singapore dollarsamonth. Considering the fact that living expenses in UK are twice of that in Singapore:aStarbuck latte costs twice, cab fares cost three times, tube (London underground) cost three times, bus fares the same, and rental fees about the twice, newspapers cost twice or more and so making 5,000 Singapore Dollars in UK is same as making 2500 in Singapore. And it is hard to getajob in UK without experience,aSingaporean friend of mine with PhD in Computer Science (followedagood honors degree from good UK univ) started career asacontractor (contract based engineer)
as it is hard to get employee job (easier to get in Singapore). A post doctoral research fellow in UK universities makes less than 20,000 Pounds and there who are complaining about Singapore should travel to UK, Europe and Australia first and live there for weeks and listen to immigrant experience there. Grass is greener somewhere but Singapore isagood starting place.
ယူကေက EU (European Union) နိုင်ငံသားတွေကို လွတ်လပ်စွာ လာရောက် အလုပ်လုပ်ခွင့် ပေးရတယ်။ သူတို့မှာ ဗီဇာ ကန့်သတ်ချက် မရှိဘူး။ မြန်မာနဲ့ တခြားနိုင်ငံသားတွေ မယှဉ်နိုင်တဲ့ အားသာချက်ပါပဲ။ စီးပွါးကျချိန်မှာ အလုပ်အကိုင် ပိုခက်လာတယ်လို့ ညီမလေးတွေ ညည်းနေကြတယ်။ ဆရာဝန်တွေကိုလည်း ပြည်တွင်း ဆေးတက္ကသိုလ်တွေက နိုင်အောင် ထုတ်နိုင်လာလို့ အပြင်ကလူတွေကို ဗီဇာနဲ့ ထိန်းချုပ်လိုက်တာ နှစ်နှစ်လောက် ရှိပြီ။ နောက်တစ်ကျော့ လူလိုရင်တော့ ဖွင့်ကောင်းပြန်ဖွင့်မလား မပြောတတ်ဘူး။ ခုလောလောဆယ်တော့ အသစ်လာမယ့် သူတွေအတွက် ခက်ခဲတာ အမှန်ပဲ။
UK ကို Student Visa ယူပြီး ရောက်နေတဲ့ လူတွေက ဟိုမှာ ဘယ်လိုကျောင်းတက်ကြောင်း အချိန်ပိုင်း အလုပ်လုပ်တာ ဘယ်လောက် ရကြောင်းတွေပဲ ပြောတယ်။ တကယ်တော့ အချိန်ပိုင်း အလုပ်လေး လုပ်ရဘို့ agent ရုံးရှေ့မှာ မနက်တိုင်း သွားတန်းစီရတာတွေ လူပြည့် သွားလို့ မလုပ်ရပဲ ပြန်လာရတာတွေ ဟော်တယ်မှာ စားပွဲထိုး လုပ်ရတာတွေ ပန်းကန်ဆေးရတာတွေ ပေါင်မုန့်ဆိုင်မှာ မုံဖုတ်ရတာတွေ ဒီဗွီဒီ အခွေတွေကို ဘူးထဲ တစ်နေကုန် မတ်တတ်ရပ်ပြီး ထည့်ရတာတွေ ပြန်မပြောပြတတ်ဘူး။ ပညာတတ် သူငယ်ချင်းတွေ အဲဒါမျိုးတွေ လုပ်နေတာ မြင်ရရင် စိတ်မကောင်းဘူး။ တစ်ချို့တွေကတော့ အလုပ်လုပ်ရင်း ကျောင်းတက် မယ်ဆိုပေမယ့် ကျောင်း စရိတ် ကြီးတာကြောင့် အဲဒီ odd job အလုပ်တွေမှာပဲ နစ်ပြီး ပိုက်ဆံရှာ နေကြ ရတယ်။ တကယ်ကတော့ ကိုယ်အဆင်ပြေနေတဲ့ နေရာက ကိုယ့်အတွက် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
သြော်ဇီ - UK - နယူးဇီလန်
ဘရစ်တွေကတော့ သြော်ဇီကို တော်တော် ကြိုက်ကြတယ်။ lifestyle နဲ့ weather ကို အဓိကပေါ့။ ပြောင်းပြေးသူတွေ အများကြီးပဲ။ New Zealand ကိုလည်း တော်တော် နှစ်သက်ကြတာ ကြားဖူးတာပဲ။
NZ is not very nice as I met more than NZ PR working in Singapore who studied in NZ graduate schools and came to work in Singapore while paying mortgage in Auckland.
One of the great things about Aus is that, here in Australia, the government paysalot of contribution towards your tuition fees when you'reaPR oracitizen. Not only that, you also get Austudy (a living expense contribution) of up to 800AUD /month.
I'm currently studying medicine here, and 80% of tuition fees are being paid by the government. One of my friends, who's studying med in US has to pay all her tuition fees by herself, even though she'sagreen card holder.
In US, med tuition fees are around USD 200,000 for the4years MD. In Aus, med tuition fees are around AUD 170,000 for the4years MBBS, for which gov pays ~80% (AUD 135,000). If you think about it like that, AUD 135K is almost half ofahouse value. This is excluding the living expense contribution.
In Aus, we have undergrad entry med (admission is based on your year 12 & UMAT scores & interview) and graduate entry med (admission is based on undergrad degree GPA, GAMSAT scores & interview). Among the number of places available, graduate entry stream makes up about 60% and it's going to increase (I think the Aus medical education sys will also transform into US like system in the future). Undergrad entry MBBS is 6-7 years in duration and grad entry is4years. We also need to do 1 year intern,2years residency and an exam before we can register to beaGP.
So yes, it takes about 13 years (after year 12) to beafully registered GP. [4 years undergrad + atleast2years in admission process for GAMSAT exam, interview, etc +4years med school + 1 year intern +2years residency/registeration]
In the United States, fresh graduate with BSEE or BSME (Bachelor of Science in Mech Engineering) will happily work for 50,000 USDayear pay. The minimum H1 pay is above 60000$ (correct me if I were wrong) but not all H1 make that money as rumored by others.
With experience and skills, one may make six figures salaries, but with federal tax and state tax combined will be around 30 to 40%. At the end of the day,aperson making 5000 SGDamonth in Singapore may be able to save as much asaperson making 5000 USDamonth in US. And if you are an American citizen, if you make more than 80Kayear, you will have to pay tax to US government even if you are living outside of US. That made some US expatriates to convert citizenship.
In Canada, I heard the tax rate is about 50% and I am not keen to pay
such rates even if it is an excellent welfare state. And I will not move to Canada as it is kind of backyard for US and eventually you will have to head south to US.
| FLAGS: International
Loi Lem - 11/21/08, 6:08 PM
ဥရောပက ခဏလာလည်တဲ့ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေတွေက စင်ကာပူကို ဒီအချက်တွေကြောင့် သဘောကျတယ်လို့ ပြောကြတယ်။
(၂) အပြင်မှာ အစားအသောက်ကို ဈေးပေါပေါနဲ့ ဝယ်စားလို့ရလို့။
(၃) ပျော်စရာလေးတွေ ရှိလို့ (အသေးစိတ် ရေးမပြတော့ဘူး။ ဆင်ဆာဖြတ်လိုက်မယ်နော်။)
(၄) Shopping ထွက်လို့ ကောင်းလို့။
ဒီမှာ ကြာကြာနေရရင်တော့ ဘာပြောကြမလဲ မသိဘူး။
Anonymous - 11/21/08, 7:15 PM
ချက်ကြီးမြို့တက်သွားပြီး သူဌေးဖြစ်တာနဲ့ နွားကျောင်းသားတိုင်း ချက်ကြီးလို သူဌေးဖြစ်မယ်လို့ ထင်တဲ့ရွာကလူတွေနဲ့ ပြည်ပရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေဟာ အနည်းနဲ့အများတူကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ လူပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာပဲ ကြီးပွားနေတဲ့သူတွေရှိသလို၊ အမေရိကားမှာ ခွေးဖြစ်နေတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ လူသာအဓိကပါ။ ကိုယ့်အနီးအနားက လူတွေမဆိုထားနဲ့ မောင်နှမသားချင်းတွေထဲမှာတောင် အောင်မြင်တာခြင်းမတူကြပါဘူး။ Why bother comparing apples and oranges.
Ko Paw - 11/21/08, 8:03 PM
အင်း….ကနေ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ…လူတွေ… လူတွေ… ငွေကြေးစကား တယ်ပြောကြပါကလား။ ရုပ်ဝတ္ထု တယ်ဆန်ကြပါတကား။
ဘ၀မှာ အောင်မြင်မှုဆိုတာကို ငွေကြေးတခုထဲနဲ့ ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူး။ တချို့ ကုန်းကောက်စရာမရှိတဲ့ဘ၀မှာတောင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနေနိုင်တဲ့လူတွေကို ကိုယ့်ဘ၀(တကယ်တမ်းကျ ကိုယ်ကလည်း ပါမွှားပါ) နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး မအောင်မြင်တဲ့လူတွေရယ်လို့ ပြောရမှာ ရှက်စရာကောင်းလှပါတယ်။ ဆိုက်ကားသမားဟာလည်း အတန်းပညာမတတ်ပေမယ့် တက္ကသိုလ်က ပီအိပ်ခ်ျဒီဘွဲ့ထူးကြီးကို လက်ဝယ်ရထားတဲ့ တချို့သော ပညာတတ်ဆိုသူတွေထက် ဘ၀အမြင်မှာ၊ အတွေးအခေါ်မှာ သာလွန်နေနိုင်ပါသေးတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကိုင်းရှိုင်းတဲ့လူတွေအနေနဲ့ ဒီအချက်ကို ပိုပြီးတော့တောင် လက်ခံကြပါဦးမယ်။
စင်္ကာပူမှာ မနေချင်ကြဘူးလို့ ပြောနေကြသူအများစုဟာ ငွေကြေးသက်သက်ကြောင့်ပြောနေကြတယ်လို့ ကျနော်မထင်ပါဘူး။ ငွေကြေးသက်သက်ကြောင့်ဆိုရင် စင်ကာပူက ခွာစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ထင်တယ်လေ။ ဒီနိုင်ငံက ငွေကြေးကလွဲလို့ လွတ်လပ်မှုနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဘာမှ ပေးစွမ်းနိုင်တာမှ မဟုတ်တာဘဲ။
ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးပိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ စုဝေးပိုင်ခွင့်၊ တိုင်းပြည်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရေးကိစ္စတွေမှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ပြောရေးဆိုပိုင်ခွင့်တွေကို တန်ဘိုးထားလို့ လွတ်လပ်လို့သာ လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကို သွားချင်ကြတာပါ။ ဒါဟာ ပန်းသီးနဲ့ လိမ္မော်သီး မတူညီတာကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းလည်းမဟုတ်။ လူဟာ ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျနေမှာလား။ အစိုးရတရပ်ရဲ့ စိတ်တိုင်းကျနေမှာလား ဆိုတာ ကွဲပြားဘို့တော့လိုအပ်တယ်။
ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျနေလိုတဲ့အခါမျိုးမှာ ကိုယ့်လွတ်လပ်ခွင့်ကို ဥပဒေတွေ အမျိုးမျိုးထုတ်ပြီး တားဆီးလာတဲ့အခါ အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်တွေကို ထိပါးလာတဲ့အခါ ငွေကြေးတခုတည်းကိုသာ မကြည့်တဲ့လူမျိုးဆိုရင် သူ့သဘာဝက လွတ်လပ်မှုကို တောင့်တလာတယ်။ အဲသည်လွတ်လပ်မှုမျိုးကို ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေက အာမခံချက်ပေးနိုင်တယ်။ ဒီမိုကရေစီဟာ ဒီမိုကရေစီပါဘဲ။ ယူတိုးပီးယားလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေထက် ဒီမိုကရေစီက လွတ်လပ်ခွင့်က ပေးစွမ်းနိုင်တာကိုတော့ ငြင်းချက်ထုတ်လို့ မရဘူး။ လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စရှိရင် ကြီးပွားချင်သူတွေအတွက် ကြီးပွားအောင် အားထုတ်လို့ရပါသေးတယ်။ မလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံမှာတော့ ငွေရှိလည်း မလွတ်လပ်ဘူး။ ကိုယ့်လွတ်လပ်ခွင့်ကို အသုံးချခွင့်မရဘူးဆိုရင် အဲသည်ဘ၀ဟာ ကျွန်သာသာ ဘ၀ပါဘဲ။
ဒါကလည်း လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေပေါ့လေ။ မြန်မာလူမျိုးမှာဆိုရင် တချို့ရှိတယ်။ ကိုယ်ချစ်နှစ်သက်တဲ့လူဘဲ ကိုယ်ယူမယ်။ ပိုက်ဆံရှိတာ မရှိတာ အရေးမကြီးဘူး ဆိုတဲ့လူမျိုး ရှိသလို…… မချစ်ပေမယ့် ယောက္ခမလောင်းက ကျိကျိတက်အောင် ချမ်းသာသူဖြစ်လို့ ယူလိုက်တယ်။ တသက်လုံး ယောက္ခမသြဇာအောက်မှာ ငွေကြေးအားဖြင့် ချမ်းချမ်းသာသာ နေသွားရတာကို ကျေနပ်နှစ်သိမ့်တဲ့လူမျိုးလည်းရှိတာဘဲ။
ကျနော့်အနေနဲ့က ဒီကနေ့ မြန်မာပြည်မှာ အဲသည်လို လွတ်လပ်ခွင့်တွေရမယ်ဆိုရင် ဘယ်နိုင်ငံမှ သွားချင်မှာမဟုတ်။ မြန်မာပြည်မှာဘဲပြန်ပြီး အေးချမ်းလွတ်လပ်တဲ့ အရသာကို ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေမှာဘဲ ခံစားတော့မှာပေါ့။ နောက်တခုက ဒီနေ့ ကိုဧရာ၊ မသီတာ ဘလော့ဂ်မှာ ဖတ်လိုက်ရတာရှိသေးတယ်။ “‘ကျွန်ဟူသည် မိမိလွတ်မြောက်ရေးအတွက် သူတစ်ပါး လာရောက်ကယ်တင်မှုကို စောင့်ဆိုင်းနေသူ’” တဲ့။ ကျနော်တို့ကတော့ ကိုယ့်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကိုယ့်ဘာသာ တိုက်ယူချင်တဲ့လူမျိုး။ ဘယ်သူ့တိုက်ပွဲရယ်၊ ဘယ်ဝါ့တိုက်ပွဲရယ်မရှိ။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူနဲ့လူချင်း ဖိနှိပ်နေပြီဆို တရားတဲ့ဘက်က ၀င်ကူရမှာ လူသားဆန်တဲ့ လူတိုင်းရဲ့တာဝန်ဘဲ။
အရာရာကို ငွေကြေးနဲ့ချိန်စက်၊ တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့တွေနောက်ကို (Paper chasing?) တခုပြီးတခုလိုက်နေခဲ့ပြီး တကယ်တန်းကျတော့ လောကမှာ သင့်တင့်ရောင့်ရဲစွာ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်တတ်ဖို့အတွက် စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းတဲ့ ဘာပညာတခုမှ တန်တန်ရာရာ ထုတ်နှုတ်မယူတတ်တာမျိုးကျတော့ သနားရုံကလွဲပြီး ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူး။ (နည်းနည်းတော့ ရယ်လည်း ရယ်ချင်တယ်။)
သြော်…ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်လေ…..ဂျူးရဲ့ ချစ်သူဖတ်ဖို့စာ ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုလေးထဲက “ဘ၀၏ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုသည် ခြံဝန်းကျယ်သော တိုက်ကြီးထဲတွင် ရှိသည်ဟု ယူဆလက်ခံထားသူများနှင့် သဘောထားမတိုက်ဆိုင်သည်မှာ ၀မ်းနည်းစရာမဟုတ်ပါ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုတော့ သဘောကျမိတာ အမှန်ပါဘဲ။
Anonymous - 11/22/08, 9:40 AM
"ကျနော့်အနေနဲ့က ဒီကနေ့ မြန်မာပြည်မှာ အဲသည်လို လွတ်လပ်ခွင့်တွေရမယ်ဆိုရင် ဘယ်နိုင်ငံမှ သွားချင်မှာမဟုတ်။ မြန်မာပြည်မှာဘဲပြန်ပြီး အေးချမ်းလွတ်လပ်တဲ့ အရသာကို ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေမှာဘဲ..."
Philipine hasademocracy but overseas Philipinos or Pinoys stands around5Millions (before you counting the second or third generation Philipinos in US).
So is India, it is democratic (yes some states are ruled by prime ministers merely with grade 10 education and half of its congress men or MPs have criminal records).
I prefer Singapore PAP style democracy than Indian or Philipinos democracies.
A democracy is justagovernance system,aframework, bounds in which people can make their living. It is notasilver bullet. Change the government today, if 50 millions people still do not know why responsible citizens have to pay tax when they are dreaming about rights. They talk about subsidized education in western nations while they do not know the tax rates are 50% even for middle income professionals. They do not know who are players in world politics and they do not learn history. I have no respects for current opposition while I dont like the current government. People like Andy are doing good job. He is enlightening the average Ko Ba, Daw Mya to become less naive (if they can access this blog). Good work Andy!!!
Anonymous - 11/22/08, 9:59 AM
"ဆိုက်ကားသမားဟာလည်း အတန်းပညာမတတ်ပေမယ့် တက္ကသိုလ်က ပီအိပ်ခ်ျဒီဘွဲ့ထူးကြီးကို လက်ဝယ်ရထားတဲ့ တချို့သော ပညာတတ်ဆိုသူတွေထက် ဘ၀အမြင်မှာ၊ အတွေးအခေါ်မှာ သာလွန်နေနိုင်ပါသေးတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကိုင်းရှိုင်းတဲ့လူတွေအနေနဲ့ ဒီအချက်ကို ပိုပြီးတော့တောင် လက်ခံကြပါဦးမယ်။"
That is pure fantasy and trying desperately to fool the poor, it may be politically correct but being poor will do more harm than being rich.
Politicians, leaders and officials with ဆိုက်ကားသမား caliber screwed up nations (US, UK and Burma) and will screw up the earth. Ifaperson who was born less fortunate can always rise up the social ladder in one way or another and there is no wayatrishaw master can be wiser thanaprofessor. He can be more cunning and manipulative, stress smart and sly but all those traits are undesirable. I worship intelligence, education and hardwork and I dont shy bashing meat heads and ဆိုက်ကားသမား caliber people are baggage in any nation. When people buy pets, they want the best ones becauseashitty street dog andanice doggy are different -one is more desirable than another- so are the people, they are different. Liberals may say people are the same, but let's face the truth, some are above others. Let's us not fool ourselves. Just work hard to rise up higher.
I quoted from the following book about the meritocracy, some may call elitism.
Anonymous - 11/23/08, 3:57 AM
း) ဟဲဟဲ..စင်ကာပူထဲမှာနေပီး..ဒီနိုင်ငံ မကောင်းေုကာင်း ပြောနေကြတယ်.. .. UK. AUSI တို့မှာလဲ.. IT အင်ဂျင်နီယာတွေ.. ဆီဆိုင်မှာ ဆီဖြည့်နေရတာ.. မသိလို့ဖြစ်မယ်
Anonymous - 11/23/08, 3:09 PM
It's self service at all the gas station in USA. No one fills your car for you.
burmesegoldbull - 11/24/08, 4:58 AM
Hi Anonymous @ 11/22/08 9:40 AM / 9:59AM...
i don't noe wat else to say.. u r damn rite.. i wish everybody could see the reality.. instead of believing in utopia...
The notion thatatrishaw driver hasabetter understanding of world view thanauniversity professor is based on some useless socialist ideas.. In socialism they need to believe that everybody is equal.. or proletariats are in better position to lead than the rich and the educated. And just like the animal farm, when the realism will sooner or later strike them.
But we can’t be blamed.. we all r educated in socialist system. But once we know our idea r out of line with the essence of democracy and capitalism, we need to change them.
Anyway, thanks Andy for bring up the topic.
Anonymous for Anonymous - 11/24/08, 1:17 PM
Sadly, your way of thinking is exactly the same as Aung Bu’s, Shwe Mi’s , swan-arr-shin’s and kyant-phont’s as they only think of the dish on their table regardless of what kind of government is ruling them.
Anonymous - 11/25/08, 6:04 AM
Well, my dish in front of me is earned by me and I did not rob, steal or sucked or begged from anyone. It is as clean and as white as Xmas snow. What do you say!!!
Anonymous for Anonymous - 11/25/08, 1:05 PM
Ha Ha….Not much to say but one question.
Is there any reason (or fear) that you don’t want to(dare to) come back to Singapore from Norway? Singapore (according to your arguments) is suchabest place in the world.
You may not want to answer this question and you can say that it is too personal. ( Everybody will think the same way for sure ).
But you know..let's say..i know your reason in some way, you can definitely imagine the extent of how much I pity you.
Or you may answer the other reason(s) which is not the real hidden reason.Don't worry! You are still *safe* as long as you are under the cover of " Anonymous ".
ko myo - 3/24/09, 4:35 AM
ဗြမာပြည်နဲ့သီရီလင်္ကာမှာ ငွေစာရင်းအရာရှိကြီးလုပ်ခဲ့ပြီး US ရောက်မှတောက်တိုမယ်ရတွေရှောက်လုပ်နေရတယ်၊စူးရှီးလိပ် ပန်ကန်ဆေး အမှိုက်ကြုံးစုံလို့ ပေါ့ဗျာ၊ အမေရိကားမှာဓာတ်ဆီကိုကိုယ်ဟာကိုဖြည့်ရလို့အဲဒီအလုပ်တော့မရှိတော့ဘူး၊ အဲအဲ..ဒါပေမယ့်ဗမာပြည်မှာကားခေါင်းမှာတောင်တခါမှမထိုင်ဘူးတဲ့လူဒီမှာဝပ်ရှော့ဆရာလုပ်နေတာရှိတယ်၊ လစာကတော့ တနှစ် ၃၆၀၀၀၊ ကျွန်တော့တောင်လာခေါ်သေးတယ် ခက်တာက ကိုယ်ကအင်ဂျင်ဝိုင်နဲ့ပုန်းရည်ကြီးခွဲတတ်တာမဟုတ်လိုမလုပ်ဖြစ်ဘူး၊ နောက်တခုက...ကျောင်းတတ်ဖို့ကတော့ရောက်ကထဲကလုံးပန်းနေတာအခုထိဘဲ၊
အမေရိကားမှာဆင်းရဲသားစရင်းဝင်လို့ အခွန်ရှင်းပြီးရင် တနှစ် ၄၀၀၀ လောက်တော့ပြန်ရတယ် (ကလေးတစ်ယောက်နဲ့မို့)၊
စပ်မိစပ်ရာတွေကီု ဖေဖေါ်ဝါရီလကစပြီးyanmyo123.blogspot မှာရေးတယ် (ဒါတောင်အမျိုးသမီးက WeSheMeဖတ်ပြီးအားပေးလို့)
Anonymous - 7/10/10, 8:43 AM
I lived in UK and US. I like US. UK is not good for.
Anonymous - 7/10/10, 12:06 PM
Wherever you live,if you haveaproper job and salary, you are happy. as for me, I don't care country.
Anonymous - 7/13/10, 8:25 PM
Hi Anonymous - 7/10/10 12:06 PM
Anonymous - 7/19/10, 2:52 PM
ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ မှာ ပျော်နိုင်ကြပါစေ။ နိုင်ငံခြားမှာ ပျော်နေတာ လည်းပျော်ပေါ့။ ကိုယ်တိုင်းပြည် အဲဒီ နိုင်ငံတွေလို ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကလေးများ အိပ်မက်ထဲမှာ ဖြစ်ဖြစ် ၀င်နိုင်ပါစေ။
sawphonelu - 7/31/10, 11:22 AM
i have read good comments about this topic. Thanks .
မန်းကိုကို - 12/8/10, 11:46 AM
ဒီဘလော့ကို ပထမအကြိမ်ရောက်ကတည်းက မရောက်ဖြစ်တာ အတော်ကြာသွားပြီဗျ။ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး မျက်စိလည်နေလဲတော့ မပြောတတ်ဖူး။
ပို့စ်ကတော့ မရောက်ဖူးသူ၊ ဗဟုသုတ ရှာချင်သူတွေအတွက် အထောက်အကူဖြစ်ပြီး ကွန်မန့်လာပေးတဲ့အထဲကလည်း ထပ်ဖြည့်တာလေးတွေ ပါလာတော့ အတော်အသင့် ပြည့်စုံသွားတယ် ပြောရတော့မှာပေါ့။
ဒီတစ်ခါလာဖတ်မှပဲ ကိုယ်တွေ့နိုင်ငံခြားအကြောင်းလေးတွေ ခြုံငုံရေးဖို့နဲ့ မိသားစုအကြောင်း ထည့်ရေးဖို့ သတိရတော့တယ်ဗျာ။ လောလောဆယ်တော့ စင်္ကာပူက အပျိုကြီးမမတစ်ယောက် နာမည်တပ်သလို “ဂဂျိုးဂဂျောင် နိုင်ငံရေးဘလော့” လုပ်မိနေတယ်ထင်ပါရဲ့ :-)
MICKY - 1/28/11, 1:58 PM
ဥရောပမှာ နေရတာမှာ အကြိုက်ဆုံးအချက်ကတော့
လွယ်ကူမြန်ဆန် စရိတ်သက်သာ နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့ တနိုင်ငံ သွားလို့ ရတာ အကြိုက်ဆုံးပါဘဲ၊